China Hub Ukunikeza mveliso kunye nabenzi | Kancinci Yong
Isakhiwo senziwe ngesihlalo sokuthwala, i-flange, isangqa sangaphakathi, ikheji, into eqengqelekayo, isivamvo se-ABS, iringi yokungenisa izixhobo, amandla aphezulu e-bolt, izinto zokutywina kunye nezinye izinto.
Iyunithi yokuthwala ihabhu iphuhliswa ngokwesiseko semigangatho yebhola yoqhakamshelwano engile kunye ne-tapered roller bearing. Ithatha iiseti ezimbini zebheringi zizonke. Inezinto ezilungileyo zokusebenza kwendibano, ukushiya uhlengahlengiso, ubunzima bokukhanya, ubumbano, umthwalo omkhulu wokuthwala, ukutywina uphawu kunokugcwaliswa ngegrisi kwangaphambili, itywina lehabhu langaphandle lishiyiwe kwaye ulondolozo lusimahla. Isetyenziswe ngokubanzi ezimotweni Kukho imeko yokunyusa ngokuthe ngcembe ukusetyenziswa kweetraki.
Shandong qianyong Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle Co., Ltd. kuyinto umenzi ngobuchule iibheringi imoto hub. Ukongeza kwimveliso eluhlaza ekhutshelwa ngaphandle, inkampani inamalungu ayo emveliso, umgca wokunyanga ubushushu, inqwelomoya, isangqa sangaphandle, umdyarho, isangqa sangaphakathi, ukugqwesa kunye nezinye izixhobo; ikakhulu uvelisa hub imoto ivili, ivili tension, umatshini steering, air conditioner, UC sphere yangaphandle, oomatshini kwezolimo, nzulu groove ibhola, non-standard kunye nezinye iinkcukacha iibheringi. Inkampani inobuchwephesha bemveliso yobuchwephesha, izixhobo eziphambili, iindlela zokufumanisa ngokupheleleyo kunye nomgangatho wemveliso ozinzileyo nothembekileyo. Iimveliso zithengiswa eYurophu, eMelika, kuMazantsi mpuma eAsia, kuMbindi Mpuma nakwamanye amazwe nakwimimandla.